ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Wat Wat Pa Pong သည် NewTek TriCaster®နှင့်NDI®တို့အားရုပ်သံလွှင့်ခြင်း၊ NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Wat Wat Pa Pong သည် NewTek TriCaster®နှင့်NDI®တို့အားအချိန်ကာလမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားမှုများအပေါ်တွင်မှီခိုသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်၎င်း၏သင်ကြားမှုများ၊ ယုံကြည်မှုများကိုမျှဝေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုသာအသုံးပြုသည် NewTek နှင့် NDI® ဗီဒီယို
Wat Na Pa Pong သည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံ Pathum Thani ခရိုင်ရှိဘန်ကောက်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ အသျှင် Ajarn Kukrit Sothipalo သည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ဦး ဆောင်ပြီးဗုဒ္ဓ ၀ ါဒဟုခေါ်သည့်အလေ့အကျင့်ဖြစ်သောဗုဒ္ဓ၏စကားများမှသင်ယူခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်ကြွေးကြော်ခြင်းတို့ကိုယုံကြည်သည်။ ထိတွေ့မှုကိုကူညီရန် Wat Na Pa Pong သည်ခေတ်မီနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများသည်နောက်လိုက်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်၎င်း၏သင်ကြားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားသူများကိုအွန်လိုင်းတွင်လျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါ့အပြင်ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် Analog စနစ်များဟာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသည်။ ထိုအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန် Wat Na Pa Pong မှလှည့်ခဲ့သည် NewTek နှင့် NDI®.
Wat Na Pa Pong ၏အကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့သည် NewTek ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်၎င်း၏သင်ကြားမှုများကိုမျှဝေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုဖြေရှင်းရန်ငြင်းဆန်သောကြောင့်စနစ်သည်တွေ့ဆုံရန်အဆင့်မြင့်ခဲ့သည်။
Ajarn Kukrit က“ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးအရာကိုရွေးတယ်။ “ စာအုပ်ထုတ်တော့အကောင်းဆုံးစာရွက်ပဲသုံးတယ်။ ဒီသင်ကြားမှုကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးပြီးလူတွေဆီသွားမှာပါ။ ငါတို့ထင်တယ် NewTek ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကိရိယာရှိသည်။ "
“ ကျွန်တော်ဟာအိုင်တီနှင့် gadget ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ NewTek system ကိုအလွယ်တကူပဲ "Ajarn Kukrit ကပြောသည်။ “NewTekဒီဇိုင်းကြောင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုအချိန်မရွေးထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုကျွန်ုပ်ဟောကြားနိုင်ပါသည်။
ICamplus ကုမ္ပဏီလီမိတက် NewTekထိုင်းနိုင်ငံ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သူသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းခွင်စီးဆင်းမှုကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည် NewTek TriCaster® TC1 နှင့် NDI PTZ ကင်မရာများ။ TriCaster TC1 ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည်ဖန်တီးသူများအားပြောင်းခြင်း၊ စီးခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည် HD ဝေးလံသောခေါ်ဆိုသူများအားဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့ယူဆောင်လာရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောဇာတိ Skype ပေါင်းစပ်မှုနှင့် 4K UHD 60p ။ ထို့အပြင် dual-channel live streaming များကိုလည်း Microsoft Live, Microsoft သို့အသုံးပြုနိုင်သည်® Azure®Periscope၊ Twitch၊ YouTube ™ Live နှင့်ပိုမိုသောအရာများဖြစ်သည်။
ဤအတောအတွင်း NDI PTZ ကင်မရာများသည်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပါ ၀ င်မှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့်အချက်ပြစီးဆင်းမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသော Ethernet ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ Camera သည် TriCaster နှင့်ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းပြီး NDI အတွေ့အကြုံနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုခံစားခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
NDI video-over-IP protocol သည် network ကို device များအကြားရှိ video signal များအားလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ပေးသည်။ အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သော NDI သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုအခြား IP protocols များသို့မဟုတ်ရိုးရာဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်အတွက် IP-based, software ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအမြင်ဆိုင်ရာပုံပြင်ပြောပြခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူခွင့်ပြုသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သော NDI ကိရိယာများကိုလည်းအသုံးပြုသည် www.NDI.tv။ NDI Scan Converter၊ NDI Studio Monitor နှင့် NDI Virtual Input စသည့်ကိရိယာများသည် TriCaster နှင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများအကြားပေါင်းစည်းမှုကိုခွင့်ပြုသည် - တီထွင်သူများကိုအပိုဆောင်းမီဒီယာအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်ပြင်ပဗွီဒီယိုများကိုထုတ်လုပ်မှုသို့အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသည် iD နှင့် Android ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်သော NDI-HX Capture အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့် NDI-HX Camera အက်ပလီကေးရှင်းမှထုတ်လုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်ဗွီဒီယိုရင်းမြစ်များကိုလျင်မြန်စွာထည့်သွင်းနိုင်သည်။
NDI setup အပြည့်အစုံသည် Wat Na Pa Pong အားနေ့စဉ်သတင်းများကို Facebook feeds သုံးခု၊ YouTube channel သုံးခုနှင့် RTMP feed တစ်ခုသို့နေ့စဉ်စီးဆင်းစေသည်။
အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ပါ NewTek, NDI နှင့် Wat Na Pa Pong တို့နှင့်ဗီဒီယိုကြည့်သည် ဒီမှာ.
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် NewTek နှင့်ဤထုတ်ကုန်အသစ်, ကျေးဇူးပြုပြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ www.newtek.com.
NewTek IP ဗီဒီယိုနည်းပညာတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူတိုင်းကိုဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်အသံပေးသည်။ ၎င်း၏ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်များကိုစျေးကွက်သို့ရောက်စေရန်ကမ္ဘာအနှံ့ရွေးချယ်ထားသည့် Channel Partners နှင့်သီးသန့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ NewTek ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားစေရန်စွမ်းအားပေးသည်။ NewTek ထုတ်ကုန်များသည် NDI မှတစ်ဆင့် IP ကိုဗဟိုပြုသည်®.
ယခင်: အရောင်းအတိုင်ပင်ခံ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းအဖွဲ့
နောက်တစ်ခု: နာမကျန်းသူများသည် KRK စတူဒီယိုမော်နီတာများဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံကြရသည်